Izixhobo zeKhaya ezi-5 Zara zabathandi be-pastry | IBezzia
Izixhobo zeKhaya ezi-5 Zara zabathandi be-pastry
UMaria vazquez | | Ukupheka
Lungisa amaqebengwana, iikeyiki kunye neekeyiki ekhaya kufuna ukuba noluhlu lwezixhobo. Akukho zixhobo zininzi zibalulekileyo, kodwa zibalulekile. Isikali sokuchaneka, iipuni zokulinganisa kunye nesitya sokudibanisa zonke izithako zezinye zezinto ezibalulekileyo.
Kwindlela entsha Ingqokelela yasekhaya yaseZara uya kufumana zonke izixhobo eziyimfuneko ukuphindaphinda iiresiphi ezinje nge ikeyiki yeopera okanye ii-cookies ze-linzer ukuba besilungiselela leKrisimesi. Izixhobo ukongeza ekusebenzeni zinoyilo olunonopheleyo, kuba akufuneki ukuba sizincame ukuba zintle. Fumanisa izixhobo zeKhaya ezi-5 zeZara zabathandi be-pastry esizikhethileyo kwaye sithandana!
1 Isikali ngqo
2 Ukulinganisa iipuni
3 Ukuxuba isitya
5 Ngomthi kunye yodongwe pin lothuli
Isikali sokuchaneka ngu izinto ezisisiseko ekhitshini. Ukulinganisa izithako kunokuba kungabalulekanga xa kulungiswa iiresiphi ezinencasa, kodwa kubalulekile ekufumaneni iziphumo ezilungileyo xa ulungisa iiresiphi ezimnandi ezifana neemuffins, iikeyiki kunye neekeyiki.
Isikali sokuchaneka kwekhaya laseZara yenziwe ngomthi womnga kunye ne-acrylonitrile butadiene styrene. Isikali esinobuntu esiya kujongeka sihle nakweyiphi na imiphezulu yeetafile. Kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Betha u "on", beka isikhongozeli kuyo, cinezela "tare" ukuseta kwakhona ikhawuntari kwaye ungeze isithako ofuna ukusilinganisa.
Phakathi kwezinto zaseKhaya zaseZara sifumana ezinye izinto, ezinje ngesikali, zisinceda ukulinganisa ubungakanani: imilinganiselo yokulinganisa. Ngokukodwa ipakethi yeepuni zokulinganisa zesinyithi ezine zegolide ezinezibambo zomthi womnga, thina vumela le miqulu ilandelayo ukuba ilinganiswe: 60ml, 80ml, 125ml, 250ml.
Kwiphatho nganye nganye uya kufumana kukrolwe ivolumu kunye neyayo ilingana neekomityi. Le yunithi, esetyenziswa ngokubanzi kwamanye amazwe afana ne-United States okanye i-United Kingdom, iya kulingana ne-120 yeegram. Ukuba neziphumo zamacephe kuyakwenza ukuguqulwa kwemilinganiselo yeeresiphi ozijongileyo kumnatha hayi ingxaki. Kwaye yi- € 25,99 kuphela.
Yiba isitya sokuxuba esenziwe ngentsimbi njengale yaseZara Ekhaya, iyasebenza ekhitshini. I-lacquered emhlophe ngaphandle, iphawulwe nge-laser ngaphakathi ukuze iiresiphi zakho zisoloko zivela zilungile.
Ngaba ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo (17.70, 21.70 kunye no-26 cm.) Kwaye ziyaxinana ukuze indawo eza kubiwa kwigunjana incinci. Azilungelanga ukuhlamba izitya okanye ii-microwaves kodwa ziyavunyelwa ukuba zisetyenziswe kwisikhenkcezisi. Ke ukuba kuya kufuneka ufake ifriji kwintlama ungayenza ngokuthe ngqo kwezi.
Ixabiso lesitya esincinci sincinci yi- € 7,99 kwaye esona sitya sikhulu yi-12,99. Ixabiso eliphantsi kakhulu indlela eziguquguqukayo ngayo ekhitshini. Uya kugqiba ubasebenzisele yonke into, siyakuqinisekisa!
Phakamisa umgubo okanye i-cocoa kubalulekile ukufezekisa iziphumo ezilungileyo kwiindlela ezithile zokupheka. Ukuba asiyenzi loo nto, sizibeka emngciphekweni wamaqhuma ashiyekileyo kwintlama. Singazihluza ngesisefo, kodwa ayisiyiyo intsimbi engenasici kunye nesisefo senkuni esivela eZara Ekhaya sihle? Ukuba unegumbi ekhitshini lulongezo olukhulu lwe- € 15,99.
Ngomthi kunye yodongwe pin lothuli
Ipini yokuqengqeleka ibalulekile ukuzisa ezinye iindlela zokupheka. Singayitshintsha ngebhotile yeglasi, ewe, kodwa ukuba ucwangcisa ukulungiselela iiresiphi ezimnandi, ezinje ngezi zicetywayo, oku kuya kuhlala kulula ngakumbi ukurola iphini ngomthi ophela ngeplanga.
Inkuni mhlawumbi ayisiyeyona nto intle yokucoca i-roller xa sigqibile ukuyisebenzisa, kodwa akufuneki nokuba yingxaki. Umthi we-Acacia yenye ye iinkuni ezinganyangekiyo, Kungenxa yoko le nto isetyenziswa ngokuqhelekileyo kwifenitshala yangaphandle.
Ukongeza kwezi, uya kufumana ezinye izinto ezininzi zekhitshi ekuqokeleleni iZara Home. Izixhobo ezinoyilo olunononophelo oluya kuba luhombiso olukhulu ukuba ngenxa yokunqongophala kwendawo okanye ubuchule uzishiya ekubukweni ekhitshini lakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ukupheka » Izixhobo zeKhaya ezi-5 Zara zabathandi be-pastry
Ixesha lesithandathu le 'Outlander' sele liqhubeka
I-chocolate ye-toni ezimbini kunye nekhekhe le-vanilla